Gobolka Galguduud oo hoos yimid maamulka Dawladda Federaalka Ku-meel-gaarka ah - Sabahionline.com
Gobolka Galguduud oo hoos yimid maamulka Dawladda Federaalka Ku-meel-gaarka ah
Galguduud, oo ay maamusho malayshiyada raacsan dawladda ee Ahulu Sunna wal Jamaaca, ayaa hoos yimid maamulka DFKMG ee Soomaaliya, sidaana waxa Isniintii (16-kii Juulaay) sheegay Radio Bar-Kulan-ka ay Qaramada Midoobaay maal-galiso.
Shirdoon oo guddoomiye ku-meel-gar ah u magacaabay Gedo
Madaxweynaha Soomaaliya oo magacaabay guddoomiyaha Baanka Dhexe
Kadib wada-tashi dhex-maray dawladda iyo maleeyshiyada, ayay labada dhinac ku heshiiyeen in maamulka haatan jira lagu wareejiyo kan gobolka, taas oo markiiba dhaqan-gali doonta. Axmed Yuusuf Xasan ayaa loo magacaabay guddoomiyahah gobolka, halka Saadiq Sheekh Xuseen loo magacaabay ku-xigeenkiisa dhinaca ammaanka.
Cabdiraxmaan Geeda-Qorow ayaa loo magacaabay guddoomiyaha degmada Dhuusamaareeb, iyada oo Xasan Cabdi Calas loo magacaabay guddoomiyaha degmada Caabud-waaq, Cismaan Ciise Taarduleed waxaa loo magacaabay guddoomiyaha degmada Guriceel, halka Hiirad Xaashi Cali isagana loo magacaabay guddoomiyaha degmada Balanbal.
Tuulooyinka Godon iyo Xanan ayaa waxa la gaarsiiyay heer degmo.